Ny cation dia karazana ionika misy fiampangana tsara. Ny teny hoe "cation" dia avy amin'ny teny grika hoe "kato", midika hoe "midina". Ny kôma dia manana fihetsiketsehana bebe kokoa noho ny elektronika , ka manome azy am-pahamendrehana.
Ny cation misy fiampangana maro dia mety nomena anarana manokana. Ohatra, ny cation iray amin'ny sazy +2 dia dika. Ny iray amin'ny takelaka +3 dia tranga iray. Ny fiokoana dia misy fiampangana tsara sy ratsy eo amin'ny faritra samihafa amin'ny molekiola, nefa ny fiampangana tsy miandany amin'ny ankapobeny.
Ny marika ho an'ny cation dia ny marika singa na ny rôles molecular, arahin'ny soritra iray amin'ny soratra miendrika. Ny isa voalohany dia nomena voalohany, arahin'ny marika fanampiny. Raha iray ny fiampangana, dia tsy omena alalana ny laharana.
Ohatra avy amin'ny Cation
Ny cation dia mety misy atôma na molekiola. Ohatra amin'izany ny :
Ny olana ara-pitondran-tena tsara indrindra - Fitomboana mitohy
Ahoana no fomba handaminana an'i Kelvin amin'ny fahamorana?
Inona avy ireo sôsialy sy fototra?
Famaritana ny fomban-javatra mifandray amin'ny ion polyatomika
Firy amin'ny vatanao no rano?
Fiheverana ara-batana, fanefitra, ary fiovam-po
Famaritana sy ohatra nasehon'ny Crenation
Fanontaniana momba ny fanandramana ara-barotra amin'ny tsara indrindra
Tantara momba ny atomika
Hevitra mikasika ny fiatrehana ny fihetsika
Boky referans Ny mpahay simia tsirairay dia tokony hanana
Inona no fanompoam-pivavahana toy izany?
Famaritana ny teny famaritana sy ohatra
Ny sainan'i Mosesy (Semantic): Famaritana sy ohatra amin'ny Gramma
Sora-pifandraisana sy Sentences
Andro masina amin'ny adidy amin'ny fiangonana katolika
Review of the 2016 Yamaha XSR900
Inona no atao hoe fandresena?
Fomba ahoana no hampihenana ny fanerena amin'ny BPA?
Fitsangatsanganana State College
Ny fomba hitazonana ny afo mirehitra mandritra ny alina
Grika paganisma: Polyphysie Hellenic
Firy ny atomona ao amin'ny sela olombelona?
Môdely ambaratonga ao amin'ny Grammaire
Mihazakazaka ny telegrama jeren'ny Michelin Smart Smart
Iza no azo atao bebe kokoa hifidy: vehivavy na lehilahy?
Fantaro ny fomba hifampiraharahana amin'ny "Frantsay"
Ahoana ny fomba handosirana ireo mpangalatra?
3 Fahalalahana sy fitenin'ny frantsay amin'ny biby
7 Movies Sinema mitarika Grace Kelly
Ny Fancy Look of Bargeboard
Fomba ambaran'ny anatomika sy ny planeta
Visa K1 ho an'ny american american fiancé (fianké)
2007 Suzuki GSXR-1000 Complete Review and Impressions
Fombafomba ao amin'ny Bodisma